नेपालले बंगलादेशसँग हार्नुका ३ कारण | Hamro Khelkud
नेपालले बंगलादेशसँग हार्नुका ३ कारण
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाल एसीसी यू१९ एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । आईतबार बंगलादेशसँग ६ विकेटले पराजित भएपछि नेपालको सेमिफाइनलमा पुग्ने संभावना सकिएको हो । नेपाल पहिलो खेलमा श्रीलंकासँग ५ विकेटले पराजित भएको थियो । नेपालले मंगलबार अन्तिम खेल यूएईसँग खेल्ने छ ।
टस हारेर ब्याटिङ थालेको नेपालले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै २ सय ६१ रन बनाएको थियो । २ सय ६२ रनको लक्ष्य बंगलादेशले ४९.२ ओभरमा ४ विकेटको क्षतिमा पुरा गरेपछि नेपालको अघिल्लो चरणको संभावना सकिएको हो । नेपालका लागि ओपनर पवन सरार्फले ८१ र सन्दीप जोराले ३७ बलमा समान ३ चौका र छक्का सहित आक्रमक ५६ रनको योगदान दिएका थिए । टेष्ट राष्ट्र बंगलादेशविरुद्ध उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै जित नजिक पुगेको नेपालले हार्नुका ३ कारण यस प्रकार छन् ।
३. टोली सन्तुलनमा कमी
बंगलादेशविरुद्ध प्लेइङ ११ हेर्दा टोली सन्तुलनमा कमी देखिन्छ । टेष्ट टोली बंगलादेशविरुद्ध नेपाल प्रमुख ३ बलरको भरमा मैदान उत्रेको थियो । सागर ढकाल, कमलसिंह ऐरी र राशिद खान बाहेक अन्य सबै ब्याट्सम्यान थिए । अर्थात ८ ब्याट्सम्यान र ३ बलरको रुपमा मैदान उत्रेको थियो । जसको कारण ब्याटिङमा केहि सुधार भएपनि बलिङमा कमजोर प्रर्दशन गर्न पुग्यो । प्रमुख बलर मध्यका स्पिनर सागर ढकालले विकेट लिन सकेनन् । त्यस्तै कमल सिंह ऐरीले ८ ओभरमा ५९ रन खर्चिदा २ विकेट लिए । त्यस्तै राशिद खानको नाममा १ विकेट रह्यो ।
अलराउन्डर पवन सरार्फले १० ओभरमा ५० रन खर्चिए तर विकेट लिन सकेनन् । कुशल मल्ल,भिम सार्की पनि विकेटविहीन रहे । हरिबहादुर चौहानको नाममा १ विकेट रह्यो । नेपालले कम्तिमा ४ प्रमुख बलर मैदान उतार्नु पर्ने थियो । सबै प्रमुख बलरको प्रर्दशन सधैं राम्रो हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । अन्य एक प्रमुख बलर मैदान उतारेको भए विकेट लिनुको साथै रनको गतिमा रोक्न सक्थ्यो । नेपाल अलराउन्डरमा बढि विश्वासका साथ ३ प्रमुख बलर खेलाएको थियो । जुन नेपाललाई घातक बन्यो । नेपालले हार्नुको कारणमा टिम सन्तुलनको कमि पनि एक हो ।
२. अली र सामिमबीचको शतकीय साझेदारी
नेपालको हारको अर्को कारण बंगलादेशका कप्तान अकबर अली र सामिम हसनबीचको पाँचौ विकेटका लागि गरेको शतकीय साझेदारी तोड्न नसक्नु । कुनै समय बंगलादेश ३२.२ ओभरमा १३२–४ को अवस्थामा पुगेको थियो । जुन समयमा खेलमा नेपाल पकड जमाई रहेको थियो । तर कप्तान अली र सामिमबीचको १ सय ३० रनको अविजित साझेदारी गर्दै टोलीको जित पक्का गरे । यी दुई ब्याट्सम्यानको साझेदारी समयमै तोड्न सकेको भए नतिजा नेपालको पक्ष्यमा आउन सक्थ्यो ।
यी दुईले अविजित साझेदारी गर्दा पनि बंगलादेशको इनिङ अन्तिम ओभरमा पुगेको थियो । समयमै विकेट लिन सकेको भए रनको गतिमा कम आउने थियो । थोरै बलमा धेरै रन बनाउने दबाबमा थप विकेट हात पार्ने सम्भावना हुँदा बंगलादेश पराजित हुन सक्थ्यो। यी दुई साझेदारी तोड्न नसक्दा नेपाल जित नजिक पुगेर पनि पराजित हुन पुग्यो ।
१. कमजोर डेथ ओभर बलिङ
डेथ ओभरको प्रर्दशन हरेक टोलीका लागि महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । हरेक ब्याट्सम्यानको सोच पनि पावर प्ले र डेर्थ ओभरमा आक्रमक साथै ठूला सट खेल्ने हुन्छ । नेपालले डेथ ओभरमा कुनै विकेट लिन सकेन । बंगलादेशलाई अन्तिम १० ओभरमा जितको लागि ६५ रन चाहिएको थियो । जुन समय दुई तिन विकेट लिन सकेको भए नयाँ ब्याट्सम्यानलाई खेल्न कठिन हुने थियो । क्रिजमा जमि सकेका अली र सामिम खुलेर खेल्दै सहज रुपमा रन बनाए र ४ बल अगाडी जित पक्का गरे । आजको हारको प्रमुख कारण डेथ ओभरमा बलरहरुले विकेट लिन नसक्नु हो ।